नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कि देउवा ? : यस्तो हुनसक्छ अबको सत्ता समीकरण ! | शुभयुग
नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कि देउवा ? : यस्तो हुनसक्छ अबको सत्ता समीकरण !
१३ फागुन,काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले संसद् पुर्नस्थापना गरेसँगै नेपालमा नयाँ सत्ता समीकरणबारे चर्चा सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नदिने र संसदको फेस गर्ने बताइसकेपछि उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुको विकल्प देखिँदैन । नेकपाको फुटले आधिकारिकता नपाएको अवस्थामा अब ओलीले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि पार्टी फुटाउने सम्भावना देखिन्छ । ओलीले पार्टी फुटाएको अवस्थामा नेकपा पहिलो दल नै हुने देखिन्छ भने ओलीको पार्टी दोस्रो दल बन्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस भने दोस्रो दलबाट तेस्रो दल बन्ने देखिन्छ ।
गएको पुस ५ मा ओलीविरुद्ध प्रचण्ड – नेपाल समूहका ९० जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले नेकपासँग सभामुखसहित १ सय ७३ जना सांसद छन् । ओलीसँग ८१ र वामदेव गौतमतिर दुई जना सांसद छन् । अविश्वासको प्रस्तावको सामाना गर्न ओलीलाई ८१ जना सांसद पर्याप्त हुँदैन । यसबीचमा केही सांसद प्रचण्ड नेपाल समूहतिर खुल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
नेकपा नमिल्दा र ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्दा नयाँ सत्ता समीकरणको लागि कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेकपाको दुवै समूहले यसअघि नै कांग्रेससँग मिलेर अघि बढ्न सक्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
कांग्रेसको देउवा समूह ओलीसँग नजिक देखिए पनि पौडेल समूह र जसपाका नेताहरु भने ओलीसँग गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा छन् । यसो हुँदा नेकपाको प्रचण्ड – नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । संयुक्त सरकार कसको नेतृत्वमा बन्नेछ भन्ने अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
नेकपा फुटेपछि तेस्रो दल बन्ने कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नैतिक बल पुग्दैन । पहिलो दल कायमै रहने नेकपाका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रचण्डलाई कांग्रेसले सहजै प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना पनि देखिँदैन ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा ओलीले देउवालाई आफैं प्रधानमन्त्री बन्न उक्साउने छन् । ओलीको समर्थनमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभन्दा आफ्नै समर्थनमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले जोड दिन सक्ने देखिन्छ । कांग्रेसमा पनि देउवाइत्तरका शक्ति कुनै पनि हालतमा ओलीसँग सहकार्य हुन नसक्ने बताइरहेको बेलामा प्रचण्ड – नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपा एक भएर सरकार चलाउने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।